Sheegashada Flash ee ku saabsan Beşikdüzü Xarumaha Gawaarida Gaarka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonSheegashada Flash ee ku saabsan Beşikdüzü Xarumaha Gawaarida Dableyda
22 / 05 / 2020 61 Trabzon, GUUD, Gondola, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY, TELPHER
Sheegasho toos ah oo ku saabsan tas-hiilaadka warshadaha fiilooyinka ee besikduzu
Trabzon Beşikdüzü Xubin ka tirsan Golaha Dowlada Hoose Önder Öztürk ayaa sheegtey in shirkada gawaarida korontada ay ka hor timid heshiiska Beşikdüzü.
Öztürk wuxuu xusay waxyaabaha soo socda; “Shirkadda ka shaqeysa Beşikdüzü Cable Car Facilities ma fuliso waajibaadka heshiiska. Sida ku xusan qodobka 7 ee 2019, 18.1 boqolkiiba isbadalkiisa + KDV saxan ilaa 15ka May 2020 Dowlada hoose waxaa laga rabaa inay bixiso mushaar la’aan. Intaa waxaa u dheer, shirkadda ma aysan siinin xaashida dheelitirka ee 2019 illaa dhammaadka Abriil. Xaaladda waxaan u bandhigayaa dareenka dadkeenna. Cidna lacag kuma tidhaahdo. "
Önder Öztürk wuxuu la wadaagay qoraalada soo socda;
1- 2018 milyan oo TL ayaa lagu kharash gareeyay tas-hiilaadka gawaarida fiilada, kaas oo ay dhameystirtay Dowlada Hoose ee Beşikdüzü sanadka 120, 35 milyan oo TLna ah lacagtaas ayaa waxaa daboolay Iller Bank oo amaah dulsaar hooseysa leh muddo shan iyo toban sano ah, oo kheyraadka iyo deeqaha dowladda hoose la kulmay.
2- Iyada oo la sifeynayo qandaraaska oo ay diyaarisay degmada Beşikdüzü, waxaa loo saaray in lagu xardho cinwaanka "Dhismaha iyo Howlgalka Hoteellada iyo Xarumaha Ganacsi ee 29 sano loogu talagalay Xarunta Cable Car Facility ee Beşikdağ Dalxiiska iyo Xarunta Ciyaaraha Dalxiiska" iyo jilicsanaanta waxay ku sii sugneyd shirkadda la yiraahdo GİZTAŞ A.Ş. Waa la saxeexay.
3- Tan iyo markii la arkay in shirkadda Giztaş A.Ş ay fulin weyday waajibaadkii ka saarnaa heshiiska Gaarka ah iyo Qandaraaska dhowr bilood ka dib, joojinta heshiiska waxaa la gaadhay danaha degmada Beşikdüzü iyo dadka iyada oo la raacayo qodobbada quseeya qandaraaska.
4- Tan iyo markii shirkadda Giztaş A.Ş ay caan ku ahayd inay ku guuleysato Tele-tender Tender of Afyon Municipality kahor Beşikdüzü, waxaa la fahamsan yahay in degmooyinka la xiriira nala soo xiriiray labada degmo. Kadib doorashadii 30-ka Maarso 2019 ee labadan degmo, maamullada cusub waxay joojiyeen iyagoo adeegsanaya shuruudaha qandaraaska iyo xuquuqda ka soo baxday heshiiska. Kaydka shirkadda, oo qiyaastii ah 10 milyan oo TL, oo ​​la siiyo degmooyinka, ayaa loo diiwaangeliyay inay tahay dakhli degmooyinka.
5- Intii lagu guda jiray howsha joojinta ee degmada Beşikdüzü, shirkadda Giztaş waxay caddeysay inay rabto inay isticmaasho ikhtiyaariga ikhtiyaarka loo yaqaan 'COMMON RECEPTION', oo ay ugu wacan tahay heshiiska. Qandaraas cusub ayaa la saxeexday shirkad la yidhaa AFR ,NA, iyada oo ay ka go’an tahay in ay fulin doonaan waajibaadka ka saaran sooca iyo qandaraaska, waxaana heshiis cusub la saxeexay Dawladda Hoose, Giztaş iyo Afrina.
6- Milkiilaha shirkadda Afrina wuxuu ahaa muwaadin u dhashay Sacuudiga. Sida ku xusan heshiiska, wuxuu lacag dhan TL 10 milyan ka siiyay degmada Beşikdüzü, oo ay ka mid tahay dulsaarka waqtigii la dhaafay. Intaa waxa u dheer, dhismaha baarkin-ku-wareegidda saldhigga hoose iyo xarunta dukaamaysiga oo la bilaabay, saldhigga sarena waxa kale oo uu bilaabay dhismaha hudheelka adduunka u qaabeeyey oo ay dhistay Dawladda Hoose illaa 13.42. Kuwani waa shaqooyinka waajibka ku ah faahfaahinta hindisada.
7- Iyo doorashadii ka dib 30-kii Maarso, 2019, Maamulka Degmada, oo xukunka la wareegay doorashadii ka dib, waxay ku ganaaxday Shirkadda Teleferik malyan milyan TL cudur daar aan caddaalad ahayn. Intaa waxaa sii dheer, ereyada nasiib darada ah ee uu Duqa Magaalada u sameeyay maalgashadayaasha carbeed ee Golaha Dowlada Hoose ee Trabzon (Dhagaxu ha soo ururiyo iskana daa shanlada. Ha u daa Beşikdüzü.) Markii lagu soo daray saxaafada, Carabtu waxay ka baxeen xaruntii caadiga ahayd ee gawaarida korontada waxayna ka bexeen Beşikdüzü. Markaa, hawlgalka gaadhiga fiilada ayaa sii waday Giztaş, lammaane kale. Dhanka kale, illaa iyo Maajo 2020, laba meelood laba meelood xukunka waxaa soo aruuriyey degmadu.
8- Markii uu la shaqeeyihii Carabtu meesha ka baxay, dhismayaashii oo dhan waa la joojiyey. Xaqiiqdii, xitaa haddii caaryada iyo birta hal dabaq ee hoteelka lagu dhisay shirku la isku tolay, waxsoosaarkan waxaa loo iibiyay qandaraaslaha qaybta qayb ka mid ah duminta birta goobta dhismayaasha burburay iyo birta ku xardhan dusha hoose.
9- In kasta oo ay jiraan dhammaan digniinaha iyo digniinaha shaqaalaha farsamada ee degmada, shirkadda hawl-gashaa ma fuliso wax waajibaad ah oo la galayo iyadoo la raacayo qandaraaska. Wadarta qiimaha lacagta ee shaqooyinka la qaban doono waa 20 milyan TL. Warbixintan waxaa soo bandhigtay Duqa magaalada Ramis Uzun Bey. Kaalay Disember 2019, shirkadda waxaa la siiyey muddo lix bilood ah oo loogu talagalay Xarunta Suuqa, oo ay tahay in lagu sameeyo xarunta-hoosaadka. Laga bilaabo Maajo 2020, hadda, weel biyood ayaa lagu shubay wax soo saarkan. Waqtigaani waa sharci daro. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay heshay Hawlaha Gawaarida Cable-ka ee shuruudaha dhameystirka shaqooyinka laga qaban doono saldhigga sare dhammaadka Juun 2020. Laakiin ilaa iyo hadda, xitaa ciddiyaha lama qarin.
10- Hadda shirkadda maamulka degmada ma door bidaa inay sii waddo degmada Afyon ee degmada Kocaeli iyo Kartepe waxay ilaalinaysaa xuquuqda muwaadiniinteeda, sidoo kale damaanad qaadista shirkadu waxay damaanad qaadeysaa bixinta Qandaraasyada iyo hanaanka TAHRIIBKA sida ay ubaahantahay qandaraaska lala saxiixday Fira? Haddii kale, waxaa la shaacin doonaa in Madaxweynaha iyo xubnaha Golaha ay galayaan dambiyo intii lagu gudajiray baaritaanka xisaabaadka ee Maxkamadda Xisaabaadka iyo Wasaaradda, waxaana lagu ciqaabi doonaa sharciga anshax xumo iyo dhaawaca shacabka. Khasaaraha ka dhashay shacabka ayaa loo wareejin doonaa kuwa ay quseyso. Waan sugi doonnaa oo arki doonnaa. (Xigasho: Qodobka 61aad.
3 oo ka socda CHP Pekşen. Dacwado xiiso leh oo ku saabsan Magaca Garoonka
Safaaradaha Ammaanka ee Saldhigga Tarsus
Su'aalaha Baaritaanka Dacwad-qaadista TCDD ee Shock Sheeg
Beşikdüzü waxay u doorataa nooca kabaha loogu talagalay baabuurta fiilada
Mashruuca gawaarida Beşikdüzü ayaa helay faaiido weyn
Besikdag Dalxiis iyo Xarunta Isboortiga Dibadda
Shirkadda Giztaş A.Ş
Ku Saabsan Saldhigga Tareenka ee Adana! Helitaanka Saldhigga Tareenka ee Adana iyo Taariikhdiisa
Mashruuca Besiktas ee Dhismaha Dhamaadka